अर्चना पनेरुको फेसबुकमा १ मिनेट ४७ सेकेण्डको र्हे’नै न’सकिने भिडियो सार्वजनिक(भिडियो सहित) -
Video antim ma xa…शा’रीरिक स’म्बन्धले स्वास्थ्यमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरको बारेमा धेरैलाई थाहा हुँदैन। विभिन्न अनुसन्धानले शारीरिक सम्बन्धले स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरुको बारेमा तथ्यहरु निकालिसकेका छन्।शा’रीरिक सम्ब’न्धको क्रममा हुने साना-साना गल्तिले पनि दैनिकीमा ठूलै असर पार्न सक्छ।शा’रीरिक सम्ब’न्धको क्रममा युवा-युवतीहरु थकाइ मार्नको लागि निदाउने पनि गर्छन्। तर यसरी निदाउनाले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्। आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि शा’रीरिक स’म्बन्ध पछि अनिवार्य एउटा काम गर्नु राम्रो हुने बताउछन् । त्यो एउटा काम हो पिसाब गर्, स’म्भोग पछि पिसाब गर्नु अति उत्तम हुने चिकित्सकहरुको भनाइ छ।
शारी’रिक स’म्बन्ध पछि महिला मात्र नभई पुरुषहरुको नशा सफा गर्न पर्ने हुँदा शारीरि’क स’म्बन्ध पछि पिसाव गर्नाले धेरै फाइदा पुर्याउंछ। यसरी शारि’रीक सम्ब’न्ध पछि पिसाब गर्नाले नशा सफा मात्रै गर्ने नभई शरीरमा भएका ए’सिडहरु पनि शरीरबाट निस्कने गर्छ।शारी’रिक सम्ब’न्धको समयमा शारिरको धेरै शक्ति प्रयोग हुने गर्छ। यसरी धेरै शक्ति प्रयोग हुँदा शरीरमा विभिन्न तत्वहरु उत्पन्न हुने गर्छ। यसरी उत्पन्न भएका तत्वहरु शरीरको लागि खतरनाक सावित हुन सक्छ। यसै कारण यस्ता तत्वहरु शरीरबाट तत्कालै फाल्नु पर्ने हुँदा शा’रीरिक स’म्बन्ध पछि पिसाब गरेको स्वास्थ्यको हिसावले धेरै राम्रो मानिने अध्ययनले देखाएको छ ।
थप समाचार- केटाहरू विवाहित महिलाप्रति आकर्षित हुने ५ कारण ,समाजमा पनि युवाहरु अविवाहित युवती भन्दा विवाहित महिलातर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । केहि पहिल गरिएको एक अनुसन्धानले यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ ।शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ आखिर पुरुषलाई विवाह गरेको महिला अन्य युवतीको तुलनामा किन आकर्षक लाग्छ ?
१. आत्मविश्वास,विवाह गरेका महिला विवाह नगरेका युवतीको तुलनामा अधिक आत्मविश्वासी हुन्छन् । उनीहरुको यही आत्मविश्वासका कारण अविवाहित युवा उनीहरुप्रति आकर्षित हुन्छन् । पुरुषहरुलाई विवाहित महिलाले हरेक समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्न र समस्यामा साथ दिन सक्छन् भन्ने लाग्छ ।२. हेरचाह,विवाह गरेका महिलाले विवाह नगरेकाको तुनलामा पार्टनरको धेरै हेरचाह गर्छन् । विवाह पछि उनीहरुलाई सधै आफ्नो घर परिवारको चिन्ता हुने गर्छ । युवालाई युवतीको यस्तो हेरचाह विशेष मन पर्छ ।
३. हर्मोन परिवर्तन,विवाह पछि महिलाको हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ । यसका कारण उनीहरुको छालामा चमक आउँछ । महिलामा आएको यस्तो परिवर्तनले पुरुषलाई आकर्षित गर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।४. स्वभाव,विवाह गरेकी युवतीले घर र घर बाहिरको सबै व्यवहारलाई सही ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सक्छिन् । यसका साथसाथै उनले आफ्ना पीडाहरुलाई लुकाएर पनि मिठो मुस्कान प्रदर्शन गर्न सक्छिन् ।५. यौ’न,विवाहित महिला तर्फ अविवाहित पुरुष आकर्षित हुनाको अर्को पक्ष यौ’न रहेको छ । यौ’नस’म्बन्ध बारेको प्रस्तावका लागि अविवाहित भन्दा विवाहित सहज हुने युवाहरको अनुमान र अपेक्षा हुन्छ ।
← नेपालीलाई खुसीको खबर : कोरोनाको औषधि अब नेपालमै हुने भयो, अबदेखि यसरी काम हुँदै दुनियाँ चकित…
चर्चित कलाकार बले र जुम्लियाको भिडियो १ घण्टामै युटुबमा भाइरल,अनिता चलाउनेको यस्तो छ तीज गीत… →